भूकम्प आउदा कुन नेताले कहाँ के गर्दै थिए ? - Nepal News - Latest News from Nepal
भूकम्प आउदा कुन नेताले कहाँ के गर्दै थिए ?
१२ वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पको पराकम्पन अझै रोकिएको छैन। भूकम्पबाट अतिप्रभावित क्षेत्रहरूको जनजीवन अझै कष्टकर छ। ७.८ रेक्टर स्केलको पहिलो झड्का आउँदा देशका नेताहरू को, कहाँ, के गर्दै थिए ?
घोप्टो परे राष्ट्रपति यादव राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव शीतलनिवासको दोस्रो तलामा रहेको निजी निवासमा बसिरहेका थिए। शनिबार कार्यालय समय नहुँदा आराममा थिए उनी। दिवा खाना खाइसकेका उनी कोठामा एक्लै थिए। उनी कोठामा एक्लै भएको वेलामा विनाशकारी भूकम्प आयो। भूकम्पको कम्पन सुरु भएपछि उनी उठे। बाहिर निस्किन खोजे। तर, उभिन सक्ने अवस्था थिएन।
प्रधानमन्त्री कोइराला प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला एसियाली–अफ्रिकी मुलुकको ६०औँ सम्मेलन सकेर इन्डोनेसियाबाट बैंककका लागि उडिरहेका थिए। बैंककमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने उनको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका थियो। जब उनी बैंककको सुवर्णभूमि विमानस्थलमा ओर्लिए, आफ्नो मुलुकमा ठूलो भूकम्प आएको सुने। प्रधानमन्त्रीका सचिवालय कर्मचारीका अनुसार स्वागतका लागि विमानस्थल पुगेका थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत खगनाथ अधिकारीले ‘हाम्रो मुलुकमा ठूलो भूकम्प गयो प्रधानमन्त्रीज्यू’ भनेपछि प्रधानमन्त्रीले आधिकारिक खबर पाएका थिए।
ओली एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालकोटस्थित निवासको बैठक कक्षमा आगन्तुकहरूसँग भेटघाटमा थिए। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्याल र सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पोखरेल भेटघाट गरेर निस्किएपछि ओलम्पिक कमिटी अध्यक्ष रुक्मशमशेर राणा भर्खरै बैठक कक्षमा छिरेका थिए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव युवराज लामा, भेटघाटका लागि दाङबाट आएका एमाले कार्यकर्ताहरू प्रतीक्षा कक्षमा थिए। ओली–राणाबीच कुराकानी सुरु मात्रै के भएको थियो, विनाशकारी भूकम्प आइहाल्यो। प्रतीक्षा कक्षमा रहेकाहरू अत्तालिँदै बाहिरिए।
वैद्यसँग थिए प्रचण्ड एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ‘माओवादी आन्दोलन पुनर्गठन गर्ने’ बैठकका लागि बिहान ११:४५ तिर धापासीस्थित नेकपा-माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ निवास पुगेका थिए। प्रचण्ड, किरण, एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महरा र माओवादी महासचिव रामबहादुर थापा ‘बादल’ बैठकमा सहभागी थिए। बैठकमा प्रचण्डले विषय उत्थान गर्दै थिए। नेताहरू जुत्ता नखोलेरै बैठक कक्षमा थिए। बैठक सुरु भएको पाँच मिनेटमै घर बेस्सरी हल्लिन थाल्यो। ‘ओहो, भूकम्प रहेछ’ भन्दै नेताहरू बाहिर निस्कन थाले। प्रचण्ड र बादल अघि–अघि र किरण र महरा पछि–पछि घरबाहिर निस्किए।
गोरखामा हिँड्दै थिए भट्टराई एमाओवादी वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले गोरखाको मकैसिंह भन्ने चेपाङ बस्तीको एउटा कार्यक्रमलाई भर्खरै सम्बोधन गरेका थिए। डाँडामा भएको सभाहलमा कार्यक्रम सकेर ५० मिटरजति ओरालो झरेका थिए। त्यत्ति नै वेला घर, रूखहरू हल्लिन थाले। जमिनै हल्लियो। ‘ओहो, यो त ठूलै भूकम्पजस्तो छ,’ उनले आफ्ना सहयोगीलाई भने। भूकम्प जाँदा भट्टराईसँगै रहेका उनका सहयोगी विश्वदीप पाण्डेका अनुसार भूकम्प जाँदाभर उनी हलचल गरेनन्। भट्टराई उभिएको वरिपरिका घरहरू भूकम्पले भत्किए। भट्टराई खोप्लाङ जाने तयारीमा थिए। उनी भूकम्प रोकिएपछि गाडीबाट हिँडे। राजमार्गमा झरिसकेपछि उनको रामेश्वर थापासँग भेट भयो। उनले काठमाडौं र भक्तपुरमा धेरै क्षति भएको बताएपछि भट्टराई खोप्लाङको कार्यक्रम स्थगित गरेर काठमाडौं फर्किए।
प्रतिष्ठानका प्रमुखसमेत रहेका कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल बोलिरहेका थिए। उनका सहयोगी चिरञ्जीवी अधिकारीका अनुसार पौडेलले उद्घाटन समारोहको समापन मन्तव्य राख्दै थिए। त्यही वेला भूकम्प गयो। भागदौड मच्चियो। तर, पौडेलले ‘ठूलो भूकम्प आयो। यसले देशमा ठूलो विनाश निम्त्याएको होला। तत्काललाई यो कार्यक्रम अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्दछु’ भने। अरू सबै बाहिर निस्किए। पौडेल भने पहिलो धक्का अवधिभर टेबलमुनि बसिरहे। ठूलो भूकम्प रोकिएपछि बल्ल बहिरिए। भाग्ने क्रममा कांग्रेस नेता रामकृष्ण यादव घाइते भए। कांग्रेस वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राखेर बसिरहेका थिए। उनीपछि उपसभापति राममन्द्र पौडेल बोल्दै थिए। देउवा एउटा कुनामा बसेर पौडेलको भाषण सुन्दै थिए। त्यही समयमा भूकम्प आयो। त्यहाँ भागदौड मच्चियो। देउवाका सुरक्षा सहयोगी हिमालय साहका अनुसार जमिन हल्लिरहँदासम्म उनी चुपचाप बसिरहे।
मौनधारणमा थिए खनाल एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल इलामको गोर्खे गाविसमा पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी थिए। सहिदको सम्झनामा मौनधारण सुरु भएको थियो। खनाल पनि मौनधारणमा थिए। त्यही वेला भूकम्प आयो। भूकम्प आएपछि केही सहभागी हलबाट बाहिर निस्के। तर, खनाल मञ्चमै बसिरहे। उनी मञ्चमै बसेकाले अधिकांश सहभागीहरू बाहिर निस्केनन्। तीन दिनको कार्यक्रम लिएर इलाम गएका खनाल बाँकी कार्यक्रम स्थगित गरी काठमाडौं फर्कन झापाको भद्रपुर झरे। तर, खराब मौसमका कारण सो दिन काठमाडौं फर्कन सकेनन्।
पार्टी उपमहासचिव विष्णु पौडेलसहित अन्य नेता पनि मञ्चमै थिए। त्यही वेला भूकम्प आयो। भूकम्पको झड्का तराईमा कम परेकाले कार्यक्रममा भागदौड भने मच्चिएन। भूकम्प आइरहँदा नेता नेपाल मञ्चमै बसे। रोकिएपछि कार्यक्रमस्थलबाट बाहिर निस्किए। भूकम्पपछि कार्यक्रम स्थगित गरेर नेपाल र पौडेल सडकमार्गबाट चितवन पुगेका थिए। भूकम्प आएको रात चितवनमा बिताएका नेपाल सडकमार्गबाटै भोलिपल्ट काठमाडौं फर्किए। ‘रूपन्देहीको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका वेला भूकम्प आएको थियो,’ उनका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले भने, ‘त्यस दिन चितवन बसेर भोलिपल्ट मात्रै काठमाडौं आउनुभयो।’ बेडमा पल्टेका थिए गृहमन्त्री गौतम एमाले उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम शनिबार परेकाले आरामको सुरसारमा थिए। पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवासको दोस्रो तलामा केही समय पुस्तक पढेका गौतम सुत्ने तरखरमा थिए। आरामकै लागि भेटघाट राखेका थिएनन्। ट्वाइलेटबाट फर्केपछि ओछ्यानमा ढल्केका थिए। त्यति नै वेला भूकम्प आयो। सुरुमा उनले ‘गाडी सफा गर्दा आवाज आएको’ ठाने। घर बेस्सरी हल्लिन थालेपछि झ्यालबाट बाहिर हेरे। त्यसपछि भने पत्नी तुलसालाई लिएर उनी बाहिर निस्किए।
निस्केपछि गौतमले मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई फोन गरी ‘आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठकका लागि सहभागी हुन मन्त्रीहरूलाई खबर गर्न’ निर्देशन दिए। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत भएकाले गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल र सहसचिव धर्मराज ज्ञवालीलाई पनि फोन गरेर ‘भूकम्प ठूलो आयो, क्षति के, कस्तो छ विवरण संकलन गर्नू’ भने।
खाना खाँदै थिए यादव मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विराटनगरस्थित आफ्नो घरमा बिहानैदेखि साथीहरूसँग भेटघाटमा व्यस्त थिए। उनका साथीहरू घरबाट निस्किएपछि उनी खाना खान बसेर एक गाँस मुखमा के राखेका थिए, विनाशकारी भूकम्प आइहाल्यो। उनी घरबाट निमेषभरमै बाहिर निस्किए। ‘जुत्ता–चप्पल खोजेर लगाउने चान्सै दिएन, खाली खुट्टा घरबाहिर निस्किएँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि खाना खाने कुरै भएन। एक–दुई रात बाहिरै बसियो।’ भूकम्पको चाल भर्टिकल हो भन्ने उनले त्यही वेला थाहा पाए। ‘त्यत्तिवेलै ठूलो जनधनको क्षति भएको हुनुपर्छ भन्ने महसुस गरेको थिएँ,’ उनले भने। यादवको डेरा रहेको हात्तीवनस्थित अपार्टमेन्ट बस्न योग्य नभएपछि उनी विराटनगरस्थित आफ्नै घरमा छन्। ‘
स्रोत: नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
पत्रपत्रिकाबाट – वर्षा अगावै बासस्थानको व्यवस्था अपरिहार्य : राष्ट्रसंघ